A tọhapụrụ GRUB 2.06 ma gụnye nkwado maka LUKS2, SBAT na ndị ọzọ | Site na Linux
Ọchịchịrị | 09/06/2021 10:05 | Emelitere ka 09/06/2021 18:27 | Aplicaciones
Mgbe afọ abụọ nke mmepe ekwuputala nkwuputa nke ulo oru ohuru nke GNU GRUB 2.06 (GRand Unified Bootloader). Na ụdị ọhụrụ a ụfọdụ ndozi na karịsịa iche iche ahụhụ fixes na-ọkọnọ Otu n'ime ha kwụpụtara nkwado maka SBAT nke na-edozi nsogbu ahụ na nwepu asambodo, yana ndozi dị mkpa megide BootHole.
Maka ndị na-amaghị nke a multiplatform modular boot boot, ị kwesịrị ịma na GRUB Na-akwado ọtụtụ nyiwe, gụnyere PC ndị bụ isi na BIOS, IEEE-1275 nyiwe (PowerPC / Sparc64 based hardware), EFI system, RISC-V na MIPS na-akwado ihe eji arụ ọrụ nke Loongson 2E, Itanium, ARM, ARM64 na ARCS (SGI) sistemụ, na - eji ngwungwu CoreBoot akwụghị ụgwọ.
1 GRUB 2.06 Key New Atụmatụ
2 Etu esi wụnye Grub ọhụrụ na Linux?
GRUB 2.06 Key New Atụmatụ
Ọhụrụ a nke GRUB 2.06 gbakwunyere nkwado maka usoro ezoro ezo disk LUKS2, nke dị iche na LUKS1 na sistemụ njikwa dị mfe, ikike iji nnukwu ngalaba (4096 kama 512, na-ebelata ibu ahụ n'oge decryption), iji ihe nchọpụta njirimara nke ihe atụ na ngwaọrụ ndabere nke metadata nwere ikike iji weghachite ya na akpaghị aka otu ma ọ bụrụ na achọpụtara nrụrụ aka.
Tambien agbakwunye nkwado maka modulu XSM (Xen Security Module) nke na-enye gị ohere ịkọwapụta mgbochi na ikikere ndị ọzọ maka Xen hypervisor, igwe na-emepụta ihe, yana ihe ndị metụtara ya.
Ọzọkwa, emechibidoro usoro mkpọchi, yiri a yiri set nke mgbochi na Linux kernel. Mkpọchi ahụ mechiri ụzọ ụzọ UEFI nwere ike isi bufee ụzọ, dịka ọmụmaatụ, na-agọnahụ ịnweta ụfọdụ ihu ACPI na ndekọ MSR CPU, na-egbochi iji DMA maka ngwaọrụ PCI, na-egbochi ibubata koodu ACPI site na mgbanwe EFI, ọ naghị ekwe ka I / O ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọzọ nke mgbanwe na-apụta ìhè bụ agbakwunyere nkwado maka usoro SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), nke na-edozi nsogbu na iwepu asambodo nke ndị na-ebu buut maka UEFI Secure Boot. SBAT gụnyere ịgbakwunye metadata ọhụrụ, nke a na-edebanye aha ya na digri ma enwere ike ịgụnye ya na ndepụta ndị enyere ma ọ bụ amachibidoro maka UEFI Secure Boot. Igwe metadata a na - enye ohere ịweghachi iji megharịa ọnụọgụ ụdị nke ngwa ahụ na - enweghị mkpa iji megharịa igodo maka buut echekwara yana n’emepụtapụtaghị aha ọhụụ.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-apụta ìhè nke ụdị ọhụrụ a GRUB 2.06:
Wepu nkwado maka obere MBR gaps (mpaghara dị n'etiti MBR na mmalite nke mpaghara diski ahụ; na GRUB a na-eji ya echekwa otu akụkụ nke buut Loader nke na-adabaghị na ngalaba MBR).
Site na ndabara, os-prober ịba uru nwere nkwarụ, nke na-achọ akụkụ nke buut site na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ ma tinye ha na menu buut.
Nkwado azụ azụ nke Linux kesara dị iche iche.
Ofu BootHole na BootHole2 ọma.
Enweela ike ịchịkọta iji GCC 10 na Clang 10 emejuputa.
Etu esi wụnye Grub ọhụrụ na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịnwe ike ịwụnye ụdị ọhụrụ nke grub na sistemụ ha, ha kwesịrị ịma na ugbu a ụdị ọhụrụ ahụ n'oge a (site na ederede ederede) enweghị ngwugwu ngwungwu ọ bụla dị maka nkesa Linux.
Ya mere maka oge iji nwee ike inweta ụdị ọhụụ a, naanị usoro dịnụ bụ ibudata koodu isi ya na chịkọta ya.
Enwere ike ịnweta koodu isi site na esonụ njikọ.
Ugbu a, iji chịkọta mkpokọta, anyị ga-emeghe ọnụ na ya, anyị ga-edo onwe anyị na folda ebe anyị na-ebudata koodu isi na anyị ga-pịnye iwu ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ GRUB 2.06 ma gụnye nkwado maka LUKS2, SBAT na ndị ọzọ.